Qaadashada Cimilada On Site Hacking: Waxa aad u Baahan inaad ogaato
Isku-xirka xiriirka macaamiisha suurtagal ah waa ka wanaagsan yahay halkii ay xadidayaan xiriirkalaga bilaabo tartamadaada. Looma baahna argagax haddii tartiib-tartameedka uu kaaga furfuro marka la eego qiimeynta. Qaadashada xirfadahaaga SEOheer kale ayaa kuu heli doona booskaaga caadiga ah. Abuuritaanka maaddo cusub iyo bixinta xariiqda ugu fiican ee adeegyada iyo alaabooyinka aad adigatartamayaashu ma bixiyaan wax badan oo wanaagsan - code bonus casino las vegas.
Igor Gamanenko, oo ah khabiir hormuud ah Sare Adeegyada Digital, waxay sharxeysaa nuxurka shabakada hacking iyo amniga.
Maalmahan, algorithm search search Google waxay leedahay hab lagu ogaado nuxurka warbixinta la daabacay iyoiyaga oo ciqaabaya. Uma baahnid in lagugu xakumo Google sababo xumeyn. Ka hor intaanad samayn SEO, waxaa muhiim ah inaad barato asaasigaiska ilaali dhibaatooyinka ku jira ololahaaga SEO. Tusaale ahaan, dhacdooyinka weerarrada shabakada iyo jebinta waa caadi. Waa dhibaatoisagoo jabiyay hacker xaasidnimo, oo lumiyay xakamaynta ammaankaaga internetka.
Dib ugu noqoshada 2014, warbixin ayaa xoraysay in ay jiraan wax ka badan 1 bilyan oo website ahinternet ah. Tirada wanaagsan ee koorsada. Sababtoo ah dormancy, tirada internetka ee diiwaangashan ayaa hoos u dhacdey isla markaana xasiliyey 2015-kii markii la garaacay994 milyan. Qaar badan oo ka mid ah suuqyada macaamiisha ayaa ka baxa SEO-ka bil kasta sababo la xiriira weerarrada shabakada. Qiyaastii 1% bogagga internetka waa cuduroo la jabsaday sababtoo ah la'aanta Indicator of Complomise. Taasi waa sida 8 milyan oo websaydh ah oo ka baxsan ganacsiga taasoo ka dhalatay jebinta.
Asal ahaan, websaydhku waa u nugul yahay in la jabiyo oo uu ku dhaco sababaha soo socda awgood:
Maqnaanshaha qaybaha sadexaad ee dhinacyada
Helitaanka kontoroolka dhinacyada kala duwan
Dib u habeynta iyo ficilada
Maxkamadeynta waxay ku jirtay SEO muddo dheer.sida dhacdada dhacdooyinka hacking dhacay, sidoo kale, yaa sameeyay jebinta dhabta ah. Dib udhigista, dhinaca kale, waxa uu tilmaamayaa sida infekshanku noqon karolaga saaray. Dib-u-hagaajintu ma sameyn karto iyada oo aan hirgelineynin iyo waliba ku-xigeen. Dib-u-habeyn habboon laguma dhigi karo meel aan jooginfarsamooyinka saxda ah.
Ganacsiyada waaweyn ma sameyn karaan iyagoo aan haysan dareenka. Ammaankaaga boggaaga aad ayuu muhiim u yahay.Waa kuwan sababaha keena sababta aad ugu baahan tahay forensics ee ururkaaga si ay u bixiyaan jebinta iyo caabuq aad website.
Haddii ay dhacdo is-afgaranwaa, waxaad ubaahan tahay baaritaan si aad u xalliso qawaaniintaada IR
Adiga oo adeeca PCI-ga, xaqiiqdii ma qaban kartid iyada oo aan hirgelinno
Dadaalka lagu fahmi karo sida heshiisku dhacay
Sidee amaanka shabakadda loo xakameynayaa
Goobaha shabakadaha internetka waxay noqon karaan kuwo aad u xiiso badan. Waxay caddaynaysaa in ganacsiyada khaldanwuxuu lahaa calaamad muujinaysa jebinta, laakiin ma u maleyneynin inuu cudurku ku faafi lahaa website-yadooda. Helitaanka xakamaynta ganacsigaaga micnaheedu waaheshiis weyn. Si aad u hesho koontarool, hacker wuxuu sameeya taxane taxane ah oo ku saabsan magacaaga iyo lambarkaaga sirta ah. Aqoonsiyadaada waa la bedeli karaalaga soo bilaabo hal illaa mid kale tan kale iyada oo loo marayo dhexgalka haboon ee ay sameeyeen hacker.
Hab kale oo loola macaamilo waa iyada oo loo marayo dayacanka software. Ma ahawaa inaad noqotaa software aad rakibtay, laakiin sidoo kale daalacashadaada. Kacbiyuutar ayaa laga yaabaa inuu helayo aqoonsigaaga adoo isticmaalaya koontaroolkaaga.
Milkiilaha bogga, waxaad u baahan tahay inaad ka shaqeyso sidii aad uga ilaalin lahayd boggagaaga inaadan ka jooginla jabsaday. Ku adkee sida booqdayaashu u galaan website-kaaga ganacsiga waa hal dhinac oo kaa caawin kara ilaalinta goobtaada. Hubi in mayaAqoonsiyada ayaa la soo bandhigaa. Samee boggaaga user-friendly adiga oo eegaya ammaankaaga internetka.